I-YIWU, China, Meyi 12, 2020 / PRNewswire / - NgoMeyi 10, 2020, umcimbi waku-inthanethi we-2020 China Brand Day uqaliwe.
Isikhathi Iposi: Jun-02-2020
I-YIWU, China, Meyi 12, 2020 / PRNewswire / - NgoMeyi 10, 2020, umcimbi waku-inthanethi we-2020 China Brand Day uqaliwe. Njengomcimbi obalulekile wokufaka uphawu lokubeka uphawu minyaka yonke emakethe ye-Yiwu, umncintiswano wabathengisi iYiwugo Top 10 nawo uqalise ngokusemthethweni inqubo yokuvota. ...Funda kabanzi »
yethule izikhuthazi zokuphakamisa ukuthengiswa kwezimoto ukuze kususwe umthelela we-COVID-19 emakethe yezimoto yasendaweni.
IShanghai (i-Gasgoo) - I-Yiwu, eyaziwa njengemakethe yezimpahla ezinkulu kunazo zonke emhlabeni, yethule izikhuthazi zokuphakamisa ukuthengiswa kwezimoto ukuze kuqedwe umthelela we-COVID-19 emakethe yezimoto yendawo. Kubiza imoto kakhulu ...Funda kabanzi »
I-Zhongnan Import and Export Co, Ltd. yasungulwa ngo-2011
I-Zhongnan Import and Export Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka we-2011 futhi itholakala edolobheni elidumile lomhlaba wonke lezimpahla-Yiwu, eChina Ibhizinisi liyagcizelela ekwakheni iphrojekthi yokwaneliseka kwamakhasimende ngezinga lokuqala ...Funda kabanzi »